Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Tena ho voahaja tokoa ve ?
Nasongadin’ny gazety iray mpiseho isanandro eto an-toerana omaly ny tenin’ny minisitry ny atitany, Razafimahefa Tianarivelo, ny filazany ny amin’ny tokony tsy hironan’ny mpiasampanjakana amin’ny firehana politika eo ampanatanterahana ny asany”. Io moa ilay ambara mandrakariva hoe “neutralité de l’administration”.
Zava-dehibe io rehefa manatanteraka ny asany ny mpiasampanjakana mba hisian’ny fitovian’ny olom-pirenena rehetra eo anoloan’ny raharaha.
Olana iray niainana teto io satria nataon’ny mpitondra fanjakana fitaovana politika hatrany ny asam-panjakana teto. Tao ny noterena mivantana na ankolaka mba hanatevin-daharana ny antokon’ny mpitondra. Tao koa ireo mpiasampanjakana mba te hahazo tombontsoa ambony kokoa noho ny rehetra dia mihazakazaka miditra manatevin-daharana ny antokon’ny mpitondra. Hatramin’ny andron’ny Pisodia faha-Repoblika voalohany no nisian’izany. Nitohy faha-Repoblika faharoa sy ny Repoblika fahatelo in-telo miantoana. Eny hatramin’ireo vanim-potoana tetezamita aza, toy ny tamin’ny naha-filoham-panjakana an-dRatsirahonana. Mbola mibaribary amin’izao andron’ny Hvm izao.
Ny fidirana ho mpikatroka amin’ny antokon’ny mpitondra aloha dia tsy fondro ary tsy heloka. Manana zo hiditra amin’ny antoko politika tiany ny olom-pirenena tsirairay. Toy ny fananan’ny tsirairay zo hirona amin’ny antokom-pinoana maharesy lahatra azy, saingy eo ampanatanterahany ny asany, dia tsy maintsy hajainy ny tsy fironana.
Amin’ny raharaha andavanandro rehetra no tokony hibaribarian’izay toe-tsaina sy fanajana ny fitsipi-pitondran-tena eo anoloan’ny asa izay fa tsy amin’ny fotoam-pifidianana ihany.
Tena ho voahaja anefa ve aloha izany amin’izao fotoana?
Eo no itarafana ny fahombiazan’ireo minisitra niainga avy amin’ny hetsi-bahoaka izay tafiditra ao anatin’ny governemanta. Tokony hiainga avy amin’izy ireo ny fanajana izay foto-kevitra tsy fironana amin’ny politika izay eo anoloan’ny asam-panjakana. Isan’ny fiovana goavana tokony ho hita mivaingana izany. Tsy iandrasana fikaonandoham-pirenena na seminera. Tsy itavandrana famatsiam-bola avy any ivelany. Tsy tokony ho vato misakana amin’ny fampahombiazana izany ny mbola fisian’ny hetsika eny amin’ny kianjan’ny 13 May.
Ireo minisitra avy amin’ny Tim sy ny Mapar no tokony ho lohalaharana manaja sy mampivaingana ny fanomezana hasina an’izany toe-tsaina amam-pitondran-tena izany. Ka hatraiza no hahafahana manaiky fa tena voahaja sy tanteraka izany? Koa “atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny eny Antsofinondry”.
INTY SY NDAY: Fahaleovan-tena poaka aty